TTSweet: ကိုမိုးချယ်ကို ကျေးဇူးတင် ...
မုန့်ထုပ်ကလဲ လေးထောင့် ပေါင်မုန့်ထုပ်လောက် အထုပ်က တော်တော်ကြီးသည်။ တော့် ဒီအထုပ်ကြီး ကုန်ပါ့မလားဆိုတော့ ညည်းတို့သားအမိရော ၀ိုင်းစားကြပေါ့ ဟုဆိုလေသည်။
အိမ်ရောက်တော့ အထုပ်ကလေးဖြည်စားကြည့်ကြတော့ မုန့်ကြွပ်က ထင်သလောက်မကောင်းလှ။ မကောင်းဆိုသည်ထက် မုန့်က လတ်ဆတ်မှုမရှိတော့ အနံ့ကလဲ သင်းသင်းမွှေးမွှေး မရှိလှ။ တီတီဆွိကတော့ တစ်ခုလောက်မြည်းကြည့်ပြီး တော့ဟာက ကောင်းလဲ မကောင်းဘူး၊ ကြွပ်လဲ သိပ်မကြွပ်ဘူး၊ ဆီချေးဆော်တောင် နံတော့မယ်ဆိုကာ ထုံးစံအတိုင်း မျိုးစုံကွန်ပလိမ့်တက်နေတော့သည်။ နောက်တော့ မုန့်ထုပ်ကို ပလပ်စတစ်ကလစ်ကလေးနဲ့ ပိတ်ပြီး မုန့်ထည့်သည့် ကပ်ဘိနက်ထဲ ထိုးထည့်ထားလိုက်သည်။
"ကိုယ်တို့တွေ ၉တန်း မြန်မာတစ်နိူင်ငံလုံး သန်းကောင်စာရင်းတွေကောက်တဲ့အချိန် လုပ်အားပေးအနေနဲ့ ဟိုးတော်တော်ခေါင်တဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာ ရောက်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်နဲ့ မိုးချယ် သူငယ်ချင်း၂ယောက်ရယ်၊ ဆရာမရယ်၊ တခြားကျောင်းသား ၃-၄ယောက်လောက်ရယ်ပေါ့။ ဒီနေရာမှာ မိုးချယ်အကြောင်း ဖြတ်ပြောရရင် မိုးချယ်တို့က ကိုယ်တို့မြို့မှာ သိပ်ချမ်းသာတာကွ။ မြို့မှာ ၃ထပ်တိုက်နဲ့ အိမ်ကြီးရခိုင်နဲ့နေကြတာ။ အဲလိုအိမ်မျိုး ကိုယ်တို့မြို့မှာ သူတို့တစ်အိမ်ပဲရှိတာ။ အမေက မြို့နယ်ဆရာဝန်မကြီး၊ အဖေကလဲ ထောင်ပိုင်ကြီးဆိုတော့ကွာ သူတို့က မြို့မှာဆို သူဌေးတွေ၊ မြို့မျက်နှာဖုံးတွေပေါ့ကွာ။ "
" အဲဒီမှာ သန်ကောင်စားရင်းကောက်ရင်းနဲ့ ရွာခံအိမ်တစ်အိမ်မှာ ညအိပ်ညနေ တည်းရတယ်။ မနက်လင်းတော့ကွာ သူတို့က မနက်စာဆို ကျွေးတာ ... ငစိန်ဆန် မာကျောကျောကို နနွင်းနိုင်းချင်းနဲ့ ၀ါထိမ်တောက်ပြီး မီးနေသည်လောက်နီးပါးနံတဲ့ ထမင်းကြော်ကို ချကျွေးတယ်ကွ ... "
" ကိုယ်လေ အဲဒီထမင်းကို ဘယ်လိုမှ မြိုချလို့မရဘူး သိလား။ ဘယ်လိုမှ စားလို့မရဘူး ... "
Posted by T T Sweet at 10:17 PM
Aunty Oo April 22, 2012 at 10:52 PM
အင်း ဦးခြိမ်.က ဘာလာလာဒေါင်းတယ်ဆိုပေမဲ. တီဆွိနဲ.တွေ.တဲ.အထိ
တီဆွိ ဘယ်လိုများ ထရိန်းလိုက်ပါလိမ်. စဉ်းစားသွား.....
T T Sweet April 22, 2012 at 11:05 PM
ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ အနောနိမတ်စ်ရေ.. ဘာလာလာဒေါင်းတယ်ဆိုတာကို ငယ်ငယ်က အလိုလိုက်ထားတဲ့ လက်ကျန်လေးတွေက ရှိသေးတယ် အဲဒီအချိန်က။ တီဆွိကတော့ သူမစားဘူးဆိုတဲ့ ဟာတွေကို စားကောင်းအောင်ချက်ကျွေးလိုက်တာပဲ .... ခုတော့ စားပါပြီ။ ချေးကတော့ မများပါဘူး။ ဟင်းတွေ ရေခဲသေတ္တာထဲ ၃-၄ရက်ကြာလဲ စားတာပါပဲ။ ကိုယ်ကတော့ သူ့လောက်ဒူပေနာပေ မခံတာ သေချာတယ်။
အန်တီဦးရေ မတွေ့တာတောင်ကြာပြီနော် ကွန်မန့်မှာ ကျေးဇူးပါရှင့်။
khinekhine April 22, 2012 at 11:57 PM
ကျနော်လဲ အရင်က အတော်ချေးများတာဗျ။ ရေခြားမြေခြားမှာ ကိုယ့်ဖာသာ တစ်ယောက်ထဲ နေရတော့မှ ကိုယ့်အမေကိုတောင် ပြန်သနားမိတယ်။ (ဘာလာလာဒေါင်းစရာမလိုလောက်အောင် ခုတော့ (တစ်ယောက်ထဲ) ကြိုးစား စားနေပါပြီ)း)
ဟုတ်ကဲ့... ဘာလာလာ ဒေါင်းတတ်နေပါပြီဗျား... :D
ပို့ စ် အသစ်တင်ပါဦး
khin April 28, 2012 at 5:01 PM
u leave us with ko moe chel until when? miss u...
san htun May 6, 2012 at 8:18 AM
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့ စ်လေးပဲ တီတီဆွိရေ..ဂျေးထူတဲ့လူတွေကို ဖတ်ခိုင်းရမယ်..
Vista May 7, 2012 at 3:10 PM
ဖေဖေဆုံးမတာနဲ့ တူတူပဲ .. မရှိတဲ့အချိန်မှာ ရှိတာနဲ့ စားနိုင်ရမယ်တဲ့
I know this is not related to the current post; but, I have to comment here as this is the last post where you may see my comment.
I just want to know sth about Medicare there. I suppose you, your husband and your daughter are eligible for that. But, when you take your mom or dad or your husband's mom or dad to Australia asadependent PR, can he/she have Medicare benefits? I wish you could write sth about healthcare there.
Hi Aunty Sweet,
Long time no see your post. Hope everything is fine and OK.
Sandy May 14, 2012 at 7:09 AM
mgchaint May 14, 2012 at 3:31 PM
Anonymous who asked about medicare benefits in Ausi, I am so sorry to say you this, I have no idea about what you have asked about your mom or dad. I suggest you that please ask medicare directly or ask who stay here for more than 4-5 years.
I wish to answer your question but we are quite new in here and we try to adapt they system.
Anonymous May 19, 2012 at 11:04 AM
Hi U Chaint,
Thank you... I will. Haveagood time you all... :)
Anonymous May 16, 2012 at 2:17 AM
hi TT sweet , i'm so tired to wait yr new post ,please ......:)
T T Sweet May 17, 2012 at 10:18 PM
အန်တီဆွိ ပိတ်သတ်တွေရေ။ sorry ပါဂျာ။ ပို့စ်အသစ် မတင်ပဲ ကြာသွားတာ။ အသစ်တင်လိုက်ပါပြီ။ လာအားပေးကြသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(၄ ၀၀) စင်္ကာပူမှ အစားအသောက်များ (13)
(၅ ၀၀) တရုတ် အစားအသောက်များ (10)